Ahoana ny fomba hitakiana ny famerenana ny volanao amin'ny iTunes | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | App store, iTunes
Efa nanana olana tamin'ny iTunes ve aho tamin'ny fividianana rindrambaiko izay nivadika ho fiasco taty aoriana. Isaky ny nitakiako tao anatin'ny minitra vitsy nividianako azy aho dia tsy nanana olana na kely aza ary naverin'izy ireo ny volako, ho fanampin'ny fisaorana ahy noho ny fifandraisako tamin'izy ireo hanatsara ny App Store. Saingy androany nangataka fanampiana tamiko ny namako iray satria efa nahazo Faktiora App Store mihoatra ny 500 €, satria ny zanakao dia efa nividy tao anaty lalao. Ahoana no nahatanterahan'izany? Satria amin'ny alàlan'ny default anao ny lakilen'ny Apple ID anao dia voatahiry mandritra ny 15 minitra, noho izany dia nisintona lalao iray izy ary avy hatrany dia nomeny an'ilay zanany kelikely, izay nanomboka nividy vatosoa sy farantsa volamena toy ny maniac.
Raha miditra amin'ny kaonty iTunes ianao dia ho hitanao fa manana ny fidirana amin'ny "History of Purchase" ianao raha tsindrio ny "jereo daholo".
Ity ny lisitry ny fividiananao farany avy amin'ny App Store. Soraty ny laharan-taratasin'ny fampiharana na fividianana olana ary ankehitriny mankanesa any amin'ny Internet-nao amin'ny adiresy manaraka: https://expresslane.apple.com/Issues.action.
Nisafidy an'ity safidy ity foana aho satria tsy mahita safidy mety kokoa. Manoratra famaritana fohy momba ny olana ianao ary manery ny "enter". Ho hitanao fa miseho ny endrika iray izay tsy maintsy ampidiranao data toy ny mailakao, Apple ID, mpamarika ny fividianana (izay nomarihintsika teo aloha) sy ny famaritana ny olana. Tonga avy hatrany ny mailaka mampahafantatra anao fa nahazo ny fangatahanao izy ireo ary hamaly anao izy ireo ao anatin'ny 24-48 ora. Ny zavatra niainako dia mamaly foana izy ireo talohan'izay, raha ny marina dia namaly tao anatin'ny adiny 4 izy ireo.
Ny valin'ny fandaniam-potoana minitra vitsy hitadiavana vahaolana dia ny € 535 mbola ao amin'ny kaonty fanamarinan'ny namako, ary indray Apple dia mampiseho ny antony tsy itovizany. Ny dingana manaraka dia ny fisorohana izany tsy hitranga intsony, izay tratra mampiasa ny fetra ananan'i iOS ao anatin'ny Fikirana.
Fanazavana fanampiny - Ampandehano ny famerana amin'ny iPad anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ahoana ny fomba hitakiana ny volanao amin'ny iTunes
gr Sina dia hoy izy:
Misaotra noho ny vaovao, saingy manantena aho fa tsy mila manararaotra an'io.
Mamaly an'i grChinas
Hattori dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny vaovao, omaly vao nampiasa ilay safidy aho, efa namaly ahy talohan'ny 24 ora izy ireo ary tsara fanahy tamiko, antenaiko fa amin'ny farany dia ho voavahako ity
Valiny tamin'i Hattori
Izy en lase dia mandefa ahy any amin'ny pejy lehibe izay ilazany fa afaka manampy anao izahay ary efa eo amin'io pejy io dia tsy haiko hoe aiza no hametrahako ny tenako hamaha ny olako, raha misy afaka manampy ahy dia misaotra betsaka anao aho!
Moreno Vera Alberto dia hoy izy:
Te-hanafoana ny fividianana itune aho, izay esorina amin'ny karako Amex.
Valiny tamin'i Moreno Vera Alberto
Manauri dia hoy izy:
Nividy fangatahana aho mba hanomezana ary hita fa tsy afaka satria AppStore avy amin'ny firenena samihafa izy ireo, nanao ny fitakiana aho ary 15 andro no niandrasako famerenam-bola, soa ihany fa $ 9.99 fotsiny. Miarahaba.
Valiny amin'i Manauri
hahahahaha efa ampiasaina tsara, miadana, noho ny famelana fitaovana matotra ho an'ny zaza tsy misy fanaraha-maso
beatriz trubiano dia hoy izy:
Tsy afaka niditra aho, avy any Arzantina dia nanana olana mitovy amin'izany aho saingy tsy hitako ny efijery noteneninao.
Mamaly an'i Beatriz trubiano
Gul dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny fampahalalana, nanova ny rohy izy ireo
Mamaly an'i gul
Laura Camila Chaves dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana aho, tsy afaka miditra na mahita ny safidy taterinao….
Valio amin'i Laura Camila Chaves
Nividy karatra iTUnes aho ary tonga kilema ary tsy te-hamerina ahy ny volako izy ireo. Mihevitra aho fa efa nangalarin'izy ireo ny volako, milaza aho fa tsy tokony hisy hividy ireto karatra ireto satria tsy misy manampy anao ary kely kokoa any Mexico, ireo iTunes dia tena mpanao kolikoly sy mpangalatra.
valentin martinez bustillo dia hoy izy:
Miezaka ny hifandray amin'ny paoma aho mba hangataka famerenam-bola amin'ny fividianana hira nataon'i James Newton Howard, Grand Canyon, tamin'ny 15 febroary 2015. Niampanga ity hira ity fa tsy alaina. Ny mailako dia martinez.bustillo@gmail.com. Tena manenina aho.
Mamaly an'i valentin martinez bustillo
Tsy misy ifandraisany amin'i Apple izahay, bilaogy tsotra momba an'io orinasa io fotsiny izahay. Na eo aza izany, ny azoko lazaina aminao dia hoe raha voadidy ilay hira dia azonao atao ny misintona azy isaky ny tianao nefa tsy voaloa intsony.
voninahitra dia hoy izy:
Mila mailaka iTunes aho satria ampandoaviny vola izay tsy laniko na ny fianakaviako.
Efa nandramako ny zava-drehetra nandritra ny volana vitsivitsy fa tsy misy.
Fernando M. Garcerán Moreno dia hoy izy:
Tsara maraina dia ampandrenesiko fa mitentina 4,811.00 pesos ny vola niseho tamin'ny kaontiko kaonty Bancomer ahy, izay sahabo ho eo. 962.2 faladia tamin'ny daty 04-05-2015 izay tsy fantatro, koa mangataka fanampiana lehibe aminao aho hanazavana ny voa amin'ity tranga ity, mialoha dia misaotra anao aho noho ny fanohananao ary mijanona miaraka aminao aho
Valiny tamin'i Fernando M. Garcerán Moreno
nancy lainfiesta dia hoy izy:
Salama, miangavy anao aho azafady mba aza sarotiny aho amin'ny iTunes tsy fantatro hoe inona ary ny antony nandoavan'izy ireo volana vitsivitsy $ 12.98 ny isan'ny iTunes dia 8667127753 izay manazava izahay fa mahasosotra ny mahita ny kaontinao. ary miampanga anao izy ireo noho ny zavatra tsy nomenao alalana, manantena aho fa hamaly ahy haingana araka izay tratra izy ireo
Mamaly an'i nancy lainfiesta
Tsy maintsy mandeha any amin'ny Apple ianao, bilaogy fampahalalana fotsiny izahay fa tsy misy ifandraisany amin'ny orinasa.
Salama, afaka manampy ahy ve ianao fa tsy nahatratra ny rohy hitakiana amin'ny fividianana tsy nahazoana alalana, manana vola fakana vola mihoatra ny 500 dolara aho.
Gabriel Robledo dia hoy izy:
Te hahafantatra ny fomba ahazoako famerenam-bola tsy lany aho ary mahazo faktiora amin'ny carte de crédit VISA aho. Iza no azonao hiresahana?
Valiny tamin'i Gabriel Robledo
NATIVIDAD GAMEZ MONGE dia hoy izy:
Tsara hariva, nividy vatosoa tamin'ny lalao Clash Royale izahay, niaraka tamin'ny iphone zanako lahy, tsy nahy. Mila fantatro raha afaka mangataka ny vola mitentina € 99,99 aho. Misaotra mialoha amin'ny fanampianao
Valiny amin'i NATIVIDAD GAMEZ MONGE
Itunes dia mpisoloky amin'ny alàlan'ny famelana sy fitaomana ny zaza tsy ampy taona hanao fividianana amin'ny alàlan'ny fitaovana ary tsy manamarina ny mombamomba sy ny taonan'ny mpividy.
IZAHO IZAY IZAO DIA VOALOHANY TSY MISY antony
MBA AZONAO VOAZANAO MBOLA manome nomerao telefaona eto eto MEXICO hitaterako azy
Leñe, toa tsy mety amiko izany.
Aza omena ilay zaza ny findainao dia ho hitanao ny fomba tsy hitrangan'izany aminao, mividiana Action Man na lalao fifaneraserana ho azy. Raha nanao izany ny zanakao dia aloavy ny vokany.
Hisy orona ny olona ...: /
Emily dia hoy izy:
Miampanga izy ireo nefa tsy mahazo alalana hahazoana ny vola ary manaisotra ny vola izy ireo raha tsy prebe abiso izay tsy haiko intsony na ahoana ny fampijanonany ny fakana ny volako satria tsy fantatro hoe ahoana no hakana ny nomeraon'ny karatro sy ny isa napetrany tao, tsy valio ianao ary alefaso any amin'ny pejy fa tsy mahavaha na inona na inona ho anao akory izy ireo
Mamaly an'i emily
MARIA CRISTINA dia hoy izy:
INDRINDRA NY VOLA
Valio amin'i MARIA CRISTINA
Esory ao amin'ny Facebook amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity ny làlan'ny namanao taloha
BTNotificationEnabler: alefaso amin'ny famantaranandro Pebble (Cydia) ny fampandrenesanao rehetra